जमैका सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो, सन्दीप विकेटविहीन - जमैका सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो, सन्दीप विकेटविहीन -
२४ भाद्र २०७७, बुधबार ०९:०७ । भारत
टस जितेपछि नाइट राइडर्सले फिल्डिङ रोज्यो । जमैकाले खाता नै खोल्न नपाउँदै विकेट गुमाउन पुग्यो । जेर्मिन ब्ल्याकउडलाई नाइट राइडर्सका अकिल हुसैनले बोल्ड गर्नुभयो । जमैकाले दुई रन जोड्दा उसका भरपर्दा खेलाडी ग्लेन फिलिप्सलाई खेइरे पियरेले अलि खानद्वारा क्याच आउट गराए । जमैकाको विकेट पतनको क्रम यतिमै रोकिएन । टोलीको स्कोर १० रन छँदा उसले तेस्रो विकेट गुमायो । मुजिबउर रहमान रन नै नबनाई पवेलियन फर्कियो । उनलाई अकिल हुसैनले ड्वाने ब्राभोको हातबाट क्याच आउट गराए । जमैकाले पाँचौँ ओभरमा चौथो विकेट गुमायो । नाइट राइसर्डका अकिल हुसैनले नै व्यक्तिगत दोस्रो विकेट लिँदै आसिफ अलीलाई चार रनमै केरोन पोलार्डको हातबाट क्याच आउट गराएको थियो ।
जमैकाका लागि नक्रुम बोनरले पारी सम्हाल्ने प्रयास गरे । उनले ४२ बल खेल्दै पाँच चौकाको मद्दतमा सर्वाधिक ४१ रनको योगदान दिनुभयो । जमैकाको स्कोर ६३ रन छँदा उनी आउट भयो । लगत्तै भरपर्दा खेलाडी आन्द्रे रसेल पनि पवेलियन फर्किनुभयो । उहाँले पाँच बल खेल्दै मात्र दुई रन बनायो । रसेललाई सुनिल नराइनेले ड्वाने ब्राभोको हातबाट क्याच आउट गराए । त्यसपछि केही बेर जमैकाको पारी कप्तान रोभमन पावेलले सम्हालेको थियो । उनले एक छक्का र एक चौकाको मद्दतमा ३५ बलमा ३३ रन बनाए । उनलाई खेइरे पियरेले जमैकाको स्कोर ९३ रन छँदा पवेलियन फर्काए । जमैकाले सात विकेटको क्षतिमा १०७ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
बलिङतर्फ नाइट राइडर्सका लागि अकिल हुसैनले तीन, खेइरे पियरेले दुई तथा सुनिल नराइने र फवाद अहमदले एक एक विकेट लिएका थिए ।
एक सय आठ रनको झिनो स्कोर पछ्याउने क्रममा नाइट राइसर्डले १५ ओभरमा एक विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । उसका लागि लेन्डले सिमोन्सले अविजित ५४ तथा टिवन वेवस्टारले अविजित ४४ रनको पारी खेल्यो । जमैकाका बलरहरू नाइट राइसर्डका खेलाडीका अगाडि निरिह सावित भयो । सीपीएलमा उत्कृष्ट लयमा रहेका जमैकाका मुजिबउर रहमानले मात्र एक विकेट लिनुभयो उहाँले सुनिल नराइनेको विकेट लिएको हो । योसँगै रहमान प्रतियोगितामा सर्वाधिक १८ विकेट लिने खेलाडी बनेको छ ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बलिङ गर्दै आएका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने नाइट राइसर्डसितको खेलमा विकेट लिनबाट चुक्यो । उनले चार ओभर बलिङ गर्दै २९ रन खर्चिए । तीन वाइड बल फाल्नुभएका उनको बलमा नाइट राइडर्सका खेलाडीले एक छक्का तथा दुई चौका समेत हाने । प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिनेको सूचीमा उनी पाँचौँ स्थानमा रह्यो । नाइट राइडर्ससितको सेमिफाइनल खेल खेल्नुअघि सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिनेको सूचीमा चौथो स्थानमा थियो ।
यसअघि सन्दीपले समूह चरणका १०० खेलमा १२ विकेट लिएको थियो । उनी सीपीएलकै सबैभन्दा किफायती बलर भएको छ । सन्दीपले समूह चरणका तीन खेलमा दुई दुई विकेट तथा छ खेलमा एक एक विकेट लिएको थियो । उनीलाई जमैका तलावाजले ९० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो । सीपीएलपछि अब उनको यात्रा इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)तर्फ मोडिएको छ ।
१. निजगढमा १५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास
२. ऐतिहासिक स्वयम्भू क्षेत्रको संरचना नभत्काउन माग
३. फापारे व्हाइ गायन प्रतियोगिताको बिजेता बने प्रेम घिसिङ र मेलिना योन्जन
४. युनिक दोङको ‘म्हाला आङा’ सार्वजानिक
५. स्व. पुष्करलालको ‘यात्रा विदेशको चिन्ता स्वदेशको’ सार्वजनिक
६. महासंघको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा